Dubai ọ bụ Ezigbo ọnọdụ maka ezinụlọ na-eto eto? | Ọrụ - Nlekọta - Njem Ee, nwee anya!
Dubai bụ ebe kacha mma maka ezinụlọ na-eto eto - Dubai City Company
Dubai ọ bụ ebe dị mma maka Ezinụlọ Na-eto Eto ?. Dubai emeela ngbanwe ngwa ngwa n'ime iri afọ ole na ole gara aga, na-enweta nnukwu ego nke itinye ego, ohere ọrụ na na-eto eto ezumike ndi mmadu bi na nso 8 nde dịka nke 2013. N'inye uru nile dị ebube nke obodo ahụ ga-enye, ọ natawo enwewanye mmasị n'aka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ndi na-eto eto na-acho ime ihe a zuru oke-nguzo ndu. Maka ndị nne na nna na-atụle ịkwaga ebe a dị n'etiti ebe ọwụwa anyanwụ, obodo ahụ nwere ọtụtụ ihe na-enye ọ bụghị nanị ọrụ-maara ihe, kamakwa maka ụmụaka na ịzụlite ezinụlọ.
Ihe omume ụmụaka na omume ezinụlọ
Dubai abụghị ọbịbịa na ọrụ omume enyi ụmụaka ma juputa na nhọrọ dị iche iche maka ụbọchị ezumike. Oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ pụtara na izu ụka n'akụkụ osimiri bụ mgbe niile nhọrọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta na ndị na-adventurous akụkụ, ị nwere ike ime ka kacha nke anwụ na-eleta na otu n'ime ụlọ mmiri na Dubai nke a na-ekpuchi ogige mmiri, 'Aquaventure' ma ọ bụ 'Wild Wadi' . N'oge ọnwa Ọchịchị, ị nwere ike ịchọọ ụfọdụ n'ime ime ụlọ dị ka
Otu n'ime Dubai ụlọ ọhụrụ Trampoline Park gụnyere 'Flip Out Dubai' ma ọ bụ 'Bounce', nke na-enye ogige ezumike, ụlọ oriri ụbọchị ọmụmụ na nchịkọta ezinụlọ. Ụlọ ihe nkiri Dubai bụ nhọrọ ọzọ dị mma nke nwere ihe ngosi "Origins nke Arabia" na-adọrọ mmasị n'ime otu n'ime ụlọ ndị omenala dị na Dubai kachasị dịtee aka.
The ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ dị na Dubai na-enye ụkpụrụ ụwa nke agụmakwụkwọ na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụlọ akwụkwọ ndị mba ọzọ nke na-eji ihe nchịkwa National Curriculum si n'ógbè dị iche iche dị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ, ndị ọpụpụ na-akwaga site na UK nwere ike ịchọ ụlọ akwụkwọ nke na-akụzi Akwụkwọ Nchịkwa Britain, ma ndị sitere na US nwere ike idebanye ụmụaka ha na US. N'ụzọ dị otú a, ụmụaka ekwesịghị ịhapụ ọkwa dị elu nke agụmakwụkwọ a na-enye n'obodo ha, ha ga-ekpuchikwa otu ọdịnaya ahụ a na-akụziri ndị ọgbọ ha n'ụlọ.
Ọnụ ọgụgụ dị ala nke ọnụ ọgụgụ
Dubai bụ obodo dị ize ndụ nke na-etu ọnụ na otu n'ime ọnụego mpụ kachasị elu na-emetụta obodo ndị yiri nha na ọnụ ọgụgụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana UAE n'ozuzu ya họọrọ dịka mba nke abụọ kasị dịrị nchebe nke ụwa na-eleta dị ka 'Olee? Njem ', ya na ndị nne na nna na-akọ na ha nwere nchebe na ezinụlọ ha mgbe ha na-eleta obodo.
Dubai n'ozuzu nwere nnukwu ego iji nye ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ndị ezinụlọ ha, ka ha ghara inwe obi ụtọ maka ọrụ ezinụlọ na nchekwa na agụmakwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-esi zụlite ezinụlọ gị ma rụọ ọrụ gị, Dubai nwere ike ịbụ ebe ahụ.
Ee, n'ezie United Arab Emirates bụ ebe zuru oke maka ndụ ezinụlọ. Na mgbe ị na-ajụ onwe gị banyere Middle East. Dubai ọ bụ ebe kachasị mma maka ezinụlọ na-eto eto? Ee, obodo a na obodo ole na ole dị nnọọ mma maka ịme ka ndụ gị dịrị. Na UAE bụ ebe zuru okè ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịbanye na Middle East.